“Haaland wuu ka fog yahay heerka Mbappé” – Xiddig hore kooxda Borussia Dortmund ah – Gool FM - Idman news
“Haaland wuu ka fog yahay heerka Mbappé” – Xiddig hore kooxda Borussia Dortmund ah – Gool FM
(Dortmund) 24 Luulyo 2021. Xiddigii hore ee Borussia Dortmund Jürgen Kohler ayaa xaqiijiyay in dhaliyaha reer Norway ee Erling Haaland uusan wali gaarin heerka xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé.
Sida ay u muuqato xiddigaha Kylian Mbappé iyo Erling Haaland ayaa xakameyn doono kubadda cagta adduunka tobanka sano ee soo socota, maadaama ay garoomada ka sii baxayaan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, oo ku soo guuleystay inta ugu badan abaal-marinada shaqsiga ah 14-kii sano ee lasoo dhaafay.
Jürgen Kohler wuxuu aaminsan yahay in awoodaha Kylian Mbappé ay ka dhigeyso inuu yahay mid gabi ahaanba ka duwan ciyaartoyda kale, isaga oo u arka in Haaland uusan soo gaarin heerkan, sababa la xiriira inuu wali ku tiirsan yahay kaliya gooldhalinta walina uusan laheyn wax khibrad ah.
Haddaba wargeksya “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay hadalada Xiddigii hore ee Borussia Dortmund Jürgen Kohler, kaddib wareysi uu bixiyay, wuxuuna yiri:
“Haaland? Wali ma ahan ciyaaryahan heer caalami ah, waa gooldhaliye, balse wuxuu leeyahay awood uu mustaqbalka kaga mid noqon karo, laakiin isagu wali ma uusan cadeynin.”
“Waa 21 sano jir, wuxuu soo maray waddo dheer, waa wax aan caadi aheyn waana hubaa inuu heli doono waddo uu ugu rogo ciyaaryahan aan la joojin karin, si uu u gaaro heerka sare oo ay tahay inuu khibrad ka helo.”
“Kylian Mbappé wuxuu leeyahay awood badan, waxaan u arkaa inuu yahay ciyaaryahan heer caalami ah, sababtoo ah kuma tiirsana xawaaraha oo kaliya, sidoo kale wuxuu dhaliyaa goolal, Mbappé ma sameeyo waxyaabo aan laga fiirsan.”
Previous Antoine Griezmann oo ku wargaliyay Barcelona kooxda uu doonayo inuu u dhaqaaqo – Gool FM
Next Muxuu tababare Solskjaer ka yiri wadahadalada u dhexeeya Paul Pogba iyo Manchester United? – Gool FM